Samabeshi Khabar – Samabeshi Khabar
Author: Samabeshi Khabar
२४ फाल्गुन २०७७, सोमबार १२:२६२४ फाल्गुन २०७७, सोमबार १२:२६२४ फाल्गुन २०७७, सोमबार १२:२६ by Samabeshi KhabarNo Comments
काठमाडौं, (ससं) । पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालमा धेरै कुराहरू रातारात चर्चा (भाइरल) भएको पाइन्छ। दाङको एउटा सडक पनि टिकटकमा हिजोआज भाइरल हो। जुन सडक अवलोकन गर्न दैनिक सयौँ संख्यामा मानिसहरू आउने गरेका छन्।दाङको घोराही उपमहानगरपालिका(१० नारायणपुरदेखि रोल्पाको होलेरी जोड्न सडक करिब एक सातायता सामाजिक सञ्जाल टिकटकमा निकै भाइरल भइरहेको हो। घोराही–१०, नारायणपुरदेखि वडा नं. ११ हुँदै १२ को सिमलकुटीसम्म करिब ९ किलोमिटर सडक कालोपत्रे भएको छ। उक्त सडक अन्तर्गत घोराही–११, झुम्केटाडी निकै भा’इरल भइरहेको छ । त्यहाँ भिडियो बनाउनको लागि जिल्लाका विभिन्न ठाउँबाट टिक टक प्रयोगकर्ताहरू पुग्ने गरेका छन्। सामाजिक सञ्‍जाल टिकटकमा भिडियोदेखि पछि आफू पनि हेर्न आएको तुलसीपुरकी कल्पना डाँगीले बताइन्। ‘टिकटकमा निकै भाइरल भएको थियो, कस्तो रहेछ भनेर हेर्न आएको हौँ,’ उनले भनिन्, ‘अन्य दिनभन्दा विदाको दिन निकै ...
२४ फाल्गुन २०७७, सोमबार १०:०४२४ फाल्गुन २०७७, सोमबार १०:०४२४ फाल्गुन २०७७, सोमबार १०:०४ by Samabeshi KhabarNo Comments
काठमाडौं, (ससं) । नेकपा पार्टीलाई नै सर्वोच्च अदालतले मान्यता दिन अस्वीकार गरेपछि छलफलका लागि प्रचण्ड(माधव पक्षका शीर्ष नेताहरुको बैठक आज बस्दैछ । उक्त गुटका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठका अनुसार सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो फैसला बारे छलफल गर्न बैठक बिहान ११ बजे बोलाइएको हो। ‘सर्वोच्च अदालतको एउटा इजलासले आज हाम्रो पार्टी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को बारेमा गरेको फैसला , त्यसको समग्र पक्ष र हाम्रो नीतिका सम्बन्धमा ११ बजे पार्टी कार्यालय पेरिसडाँडामा बस्ने स्थायी कमिटीको बैठकबाट निर्णय लिइनेछ’ बैठकबारे उनले भने। सर्वोच्च अदालतले आइतबार नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको आधिकारिकता ऋषि कट्टेल नेतृत्वको नेकपालाई दिएपछि सत्ताधारी नेकपाको एकीकरण संकटमा परेको छ। अदालतले साविककै एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँतिने फैसलामा उल्लेख गरेको छ ।...
२४ फाल्गुन २०७७, सोमबार ०९:०७२४ फाल्गुन २०७७, सोमबार ०९:०७२४ फाल्गुन २०७७, सोमबार ०९:०७ by Samabeshi KhabarNo Comments
काठमाडौं, (ससं) । सर्वोच्च अदालतले पार्टी एकता नै बदर गरेपछि तत्कालीन माओवादी केन्द्रले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने भएको छ । एमालेसँग पार्टी एकताको पहल गर्नेमध्येका एक जनार्दन शर्मा ‘प्रभाकर’ले सरकारको समर्थन फिर्ता लिने बताएका छन् । अन्य नेताहरुले पनि सरकारको समर्थन फिर्ता लिने बताएका छन् । तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकता नहुँदै ओली प्रधानमन्त्री बनेका थिए । संयुक्त गठबन्धन बनाएर चुनाव लडेकाले माओवादी केन्द्रले ओली नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन गरेको थियो । एमाले र माओवादी केन्द्र एकीकरण भएपछि २०७५ जेठ ३ गते नेकपा गठन भएको थियो । तर निर्वाचन आयोगमा ऋषि कट्टेल नेतृत्वमा पहिल्यै नेकपा दर्ता भएकाले कट्टेलले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । सो रिटमा आइतबार फैसला सुनाउँदै सर्वोच्चले एमाले र माओवादीको एकतापछि बनेको नेकपा खारेज गर्दै कट्टेल...
२४ फाल्गुन २०७७, सोमबार ०७:५५२४ फाल्गुन २०७७, सोमबार ०७:५५२४ फाल्गुन २०७७, सोमबार ०७:५५ by Samabeshi KhabarNo Comments
काठमाण्डौं, (ससं) । तितेपाति हाम्रो नेपालको पहाडी भेगमा जताततै पाईन्छ तर यसको फाइदा बारे कसैलाई थाहा हुदैन । तितेपाती नेपालमा पाइने एक किसिमको जडीबुटी हो । तितेपातीका धेरै फाइदाहरु रहेका छन् । यसको तेलबाट हाड दुखाइ, जिउ चिलाउने, उच्च रक्तचाप तथा ज्वरोको औषधि समेत बनाउन सकिने वनस्पति विज्ञहरूले दाबी गरेका छन् । लुतो निको पार्न तथा कुनै किसिमको चोट लाग्दा पनि यसको पातलाई माडेर झोल निकाली प्रयोग गरेमा आराम दिन्छ । चर्मरोग र सुन्निएको ठाउँमा पनि तितेपातीको प्रयोग निकै उपयोगी मानिन्छ । यति मात्र नभई तितेपाती युरिक एसिड, एलर्जी, डिप्रेसन तथा निद्रासम्बन्धीका अन्य समस्या निराकरण गर्नका लागी पनि उपयोगी मानिन्छ । साथै यस वनस्पतिबाट अत्तर पनि बनाउन सकिन्छ । मधुमेहका बिरामीले तितेपातिको जरा कुटेर त्यसको पाउडर राति सुत्ने बेलामा पानीमा घोलेर एक सातासम्म खाँदा निकै फाइदा गर्छ । यसको जराको पाउडर बनाई ब...
२४ फाल्गुन २०७७, सोमबार ०७:१४२४ फाल्गुन २०७७, सोमबार ०७:१४२४ फाल्गुन २०७७, सोमबार ०७:१४ by Samabeshi KhabarNo Comments
आज १११औं अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवस, कसरी मनाइँदैछ ?
प्रमुख समाचार, ब्यानर
काठमाडौं, (ससं)।आज विश्वभर विविध कार्यक्रम गरी १११औं अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवस मनाइँदैछ । हरेक वर्ष मार्च ८ तारिखमा यो दिवस मनाउदै आइएको छ । नारी मुक्ति आन्दोलनकी अभियन्ता क्लारा जेट्किनले सन् १९११ मार्च ८ मा महिला कामदारमाथि भएको श्रम शोषणविरुद्ध आवाज उठाएको दिनको स्मरणगर्दैविश्वभर महिला दिवस मनाउने प्रचलन रहेको छ । नारी दिवसका अवसरमा नेपालमा पनि विभिन्न सचेतनामुलक कार्यक्रमहरु आयोजना गरी नारीको हकहितसम्बन‌धी चेतना फैलाउँदै यो दिवस मनाइने गरिन्छ । त्यसैगरी अन्य कार्यक्रमहरुको पनि आयोजना गर्ने गरिन्छ । नारी दिवसका अवसरमा सरकारले आज सार्वजनिक बिदा दिएको छ ।...
२४ फाल्गुन २०७७, सोमबार ०६:२६२४ फाल्गुन २०७७, सोमबार ०६:२६२४ फाल्गुन २०७७, सोमबार ०६:२६ by Samabeshi KhabarNo Comments
फागुन २४ गते सोमबारको राशिफल
मेष (चु, चे, चो, ला, लि, लु, ले, लो, अ) रोकिएका काममा दोहोऱ्याएर प्रयत्न गर्नुपर्ला। शुभचिन्तकसमेत प्रतिपक्षीको प्रभावमा आउन सक्छन्। सहयोगको तत्परता देखाउनेहरू पछि हट्नेछन्। सोचेको समयमा काम नबन्न सक्छ। आफ्ना सूचना बाहिरिने समय रहेकाले गोपनीयतामा ध्यान पुर्याउनुहोला। उपलब्धिका लागि केही समय प्रतीक्षा गर्नुपर्ला। वृष (इ, उ, ए, ओ, बा, बि, बु, बे, बो) परिश्रमअनुसार उपलब्धि पनि राम्रै पाइएला । सामाजिक क्षेत्रमा सफलता मिल्नेछ । मनमा कला,साहित्य तथा संगीतमा रुचि बढ्नेछ । सहयोगीहरूको माध्यमबाट राम्रै फाइदा हुनेछ। आयस्रोत बढ्नुका साथै दिगो फाइदा हुने काम सुरुवात हुनेछ। मिथुन (का, कि, कु, घ, ङ, छ, के, को, ह) सामाजिक उत्तरदायित्व वहन गर्दै फाइदा हुने काम र जिम्मेवारी हात पार्ने मौका छ। प्रयत्न गर्दा आफ्नो वर्ग वा क्षेत्रको नेतृत्व हातलागी हुनेछ। मेहनत परे पनि भाग्यले राम्रै अवसर दिलाउनेछ।...
२४ फाल्गुन २०७७, सोमबार ००:०५२४ फाल्गुन २०७७, सोमबार ००:०५२४ फाल्गुन २०७७, सोमबार ००:०५ by Samabeshi KhabarNo Comments
काठमाडौं, (ससं) । पछिल्लो समय शेयर बजारमा लगानी गर्नेको संख्या बढ्दै गएको छ। अनलाइनबाट शेयर कारोबार गर्नेको संख्या पनि उलेख्य रुपमा बढ्दै गएको छ । कतिले बुझेर लगानी गरेका हुन्छन् भने कतिले त अरुको कुरा सुनेर शेयर बजारमा लागनी गर्ने गरेका छन् । शेयर बजारमा सुरक्षित हुनका लागि यी कुरालाई ध्यान दिन आवश्यक छ । शेयर बजारमा लगानी गर्नु भन्दा पहिला दुई ओटा कुरा सबैले जन्नु पर्दछ । एउटा प्राथमिक बजार र अर्काे दोस्रो बजार । प्रथमिक बजारको लगानी सुरक्षित हुन्छ भने दोस्रो बजारको लागनीमा जोखिम हुने गर्दछ । शेयरलाई धितोपत्र खरिद विक्री भनिन्छ । १) सार्वजनिक निष्काशन भएको समयमा धितोपत्र खरीद गर्दाः –निष्काशनकर्ता कम्पनीको विवरणपत्र अध्ययन गरी कम्पनीको कार्य सम्पादन स्थिति, वित्तीय स्थिति नेटवर्थ, नाफा नोक्सान स्थिति आदि, व्यवस्थापन पक्ष, जोखिम पक्ष जस्ता महत्वपूर्ण कुराहरुको विश्लेषण गरेर मा...